မရီးတော်စပ်သူအပျိုကြီး – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 10, 2021 Author admin	Comments Off on မရီးတော်စပ်သူအပျိုကြီး
ကျနော် အိမ်ထောင်ကျတော့ မိန်းမဖက်က အစ်မ .မရီးတော်စပ်သူ အပျိုကြီးနဲ့အတူတူအိမ်ကို ခေါ်နေရတယ်လေ..။ မရီးကလည်း ကျနော့်ကို ချစ်ရှာပါတယ်.။ သူက တက္ကသိုလ်က ဆရာမဆိုတော့ မနက်ဆို ကားလေးမောင်းပြီး ကျောင်းကိုလိုက်ပို့ညနေဆို သွားကြိုနဲ့ရင်းနှီးမှုတော့ အတော်ရှိလာတယ် .။ သူ့ အကြောင်းနဲ့သူပုံစံကို ပြောရဦးမယ်.။ သူက အပျိုကြီး စစ်စစ်ဗျ..။ အသက်က ၃၅ ရောက်နေပြီ ။ ငယ်စဉ်ကတော့ ရည်းစားရှိခဲ့ဖူးပေမဲ့ ဇာတာမပါတော့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အထိ မဖြစ်မြောက်ခဲ့ဘူး..။ ရုပ်ရည်နဲ့ ကိုယ်လုံးက ဆက်စီ မဖြစ်ပေမဲ့ အဆီကင်းပြီး ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်ပဲ..။ ပြောရရင် အသားကဖြူ..ရင်လေးက မောက်မောက် ဖင်လေးက ကောက်ပေါ့..။ သူက ကျနော့်မိန်းမ သူ့ညီမကို အရမ်းချစ်တော့ ကျနော်ကိုလည်း ချစ်ရတော့တာပေါ့ ။ ကျနော်ကလည်း သူ့ ကို ကိုယ်အစ်မတစ်ယောက်လို ပြန်ပြီး ဂရုစိုက်မိ ပါတယ်..။ ပိုပြီးခင်ဘို့ ကောင်းတာက နှစ်ယောက်တည်းများ ကိစ္စရှိလို့ အပြင်ကို သွားကြရင် သူနဲ့ ကျနော်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ ပြော ဆိုဆက်ဆံပြီး.သွားလာရတာ ပျော်စရာတစ်ခုပါ ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မရီးက နယ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘို့ အမိန့် ကျလာတော့ သူ့ ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းထုပ်ပိုးပြီး ကျနော်တို့ လင်မယား ၂ ယောက် အတူလိုက်ပို့…ဟိုကို ရောက်တဲ့အထိ လိုက်ပို့ ပြီး အဆောင်မှာ ပစ္စည်းတွေ နေရာချပေး..နေရေးထိုင်ရေး အဆင်ပြေတဲ့အထိ စီစဉ်ပေးပြီးမှ ပြန်လာကြတာလေ..။ ဒီလိုနဲ့ နိစ္စဓူဝ ကျောင်းပို့ ကျောင်းကြို တာဝန်တစ်ခု လျော့ပါးသွားတော့လည်း လွမ်းမိသလိုလိုရယ်..။ ဒီလိုနဲ့ တပတ်ပဲကြာသေးတယ်..စားရေးသောက်ရေး အဆင်မပြေဘူး ဖုန်းဆက်လာတော့ မိန်းမဖြစ်သူကအကြော်အလှော် အခြောက် အခြမ်းလေးတွေ လုပ်ပေးပြီး သွားပို့ ဖို့ စီစဉ်ရတော့တာပေါ့ဗျာ..။ မိန်းမဖြစ်သူက ဒီတစ်ခေါက်ပင်ပန်းးလို့ ဆိုပြီး.နေခဲ့မယ်တဲ့..။ ကျနော် တစ်ယောက်ထဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့ စွာနဲ့ကားလေးမောင်းရင်း မရီးရှိရာကို သွားခဲ့ရတော့တယ်..။ မရီးတော်သူက အတော့်ကို မျှော်နေပုံပဲ..။ ကျနော်ရောက်သွားတော့ မျက်နှာကို ၀င်းပသွားပြီး အတော်ပျော်ရွင်နေပုံရတယ်.။ မရီးကို တွေ့ ရတာလည်း နဲနဲ ပိန်သွားတယ်လေ..။ ဒါနဲ့ ပဲ နေ့ လည်စာကို အပြင်မှာ အတူစားကြတယ်..။ ပြီးတော့ သူတာဝန်ကျရာ မြို့ မှာ ရှိတဲ့အထင်ကရနေရာတွေကို ကျနော်က လိုက်ပို့ ရတာပေါ့ဗျာ..။ ညနေပိုင်းရောက်တော့ ကျနော်တည်းခိုဖို့ဟိုတယ်ကို သွားမယ် အလုပ် သူကလည်း ဒီည အပြင်မှာ ထွက်အိပ်မယ်ဆိုတာနဲ့တစ်ယောက်တစ်ခန်း ယူလိုက်ကြတာပေါ့ ။
အဲ့ဒါနဲ့ကျနော်တို့ ရေမိုးချိုးပြီး ညပိုင်း အပြင်ကို ထပ်ပြီး လည်ပတ်ကြပြန်ရော..။ ခက်တာက ညပိုင်းရောက်လာရင် ကျနော်က ဘီယာလေး သောက်ချင်တတ်တယ်..။ အပြင်မှာ သောက်ရင်လည်း သူက လိုက်လို့ မရ ။ တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ယောက်ဆိုတာ မြို့ ခံတွေက သိနေတော့ ဘယ်နေရာမှ မလွတ် လပ်..၊ ဒါကြောင့် သူကပဲ စပြီး သောက်ချင်ရင် ဟိုတယ်အခန်းပြန်ရောက်မှပဲ သောက်ပါ..အဖော်မရှိရင် သူပါ ကူသောက်ပေးမယ် ဆိုလာ တော့ ကျနော်လည်း သဘောတူလိုက်တော့တယ်..။ ဒီလိုနဲ့စားစရာတွေ ၀ယ်ပြီး ည ၉ နာရီလောက်မှာ ဟိုတယ်ကို ပြန်ရောက်တော့ တာပေါ့..။ ဟိုတယ်လည်းရောက်ရော မရီးက ည၀တ်အင်္ကျီလေးလဲပြီး ကျနော့်အခန်းကို ရောက်လာတယ်..။ ကျနော်ကတော့ mini ဘား ထဲက ဘီယာပုလင်းဖောက်ပြီး သူ့ အတွက် တစ်ခွက် ကျနော့်အတွက် တစ်ခွက်နဲ့တီဗီကြည့်ရင်း စသောက်ကြတာပေါ့..။ အရင် ကတည်းကလည်း သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းခဲ့တာဆိုတော့ ပွင့်လင်းပါတယ်..။ သူ့ ရဲ့အလုပ်အကိုင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဒီလို သောက်စား ပြီး နေလို့ မရတာကြောင့် ကျနော်နဲ့ လိုက်ပြီး ဘီယာသောက်တာနေမယ်..။ မရီးကတော့ ဘီယာလေး တစ်ခွက်နဲ့လည်နေခဲ့ပြီ..။ ကျနော်လည်း နောက်တစ်ခွက်လောက် ထပ်ထည့်ပေးရင်း ဆက်သောက်ကြတာပေါ့။
လူဆိုတာ ထန်းရည်မူးမှ ကျွဲခိုးပေါ်တယ်လို့ ပဲ ဆိုရမလား..ဘီယာမူးတော့မှ တစ်သက်လုံး ထိန်းခဲ့တဲ့ လိင်စိတ်တွေ ထကြွလာပုံရတယ် သူ့ ညီမနဲ့ကျနော်ရဲ့မင်္ဂလာဦးည အတွေ့ အကြုံကို မေးတော့တာလေ…။ ကျနော်တို့ လင်မယားကလည်း မင်္ဂလာမဆောင်ခင်တည်းက ခိုးစားနေခဲ့ကြတော့ မင်္ဂလာဦးညက သိပ်မထူးဆန်းခဲ့ပါဘူး..။ ဒါကို သူက မယုံဘူး..။ ဘယ်လိုမှ ပြောပြလည်း လက်မခံ..မူးပြီး ရစ်နေသလို မျိုးနဲ့ခဏခဏ မေးနေတော့တာပဲ..။ နောက်တော့လည်း သူက သိပ်စိတ်မရှည်တော့လို့ ထင်တယ်..။ မေးခွန်း တစ်ခုပဲ မေးမယ်.သေချာ ဖြေတဲ့…။ အဲ့ဒီမေးခွန်းကို ကြားလိုက်တော့မှပဲ သူဘာဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့တယ်..။ အဲ့ဒါက ” နင်နဲ့ အတူနေတိုင်း ငါ့ ညီမက ဘယ်လိုနေလဲ ..ဘာပြောလဲ ” တဲ့..။ ကျနော်ကတော့ ခပ်နောက်နောက်ပဲ…သိချင်ဝယ်ဖတ်ပေါ့လို့ ဖြေလိုက်တယ်..။ မိန်းမတွေ များ မူးလာရင် ရစ်တယ်ပဲ ပြောရမလား..သူတို့သိချင်တာရှိရင် နားငြီးလောက်အောင် ခိုလိုပဲ ငြီးပြီး ပြောတော့တာပဲ..။ တိတိကျကျ မဖြေ ချင်လို့ကွေ့ ပတ်ရှောင်နေတာကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ မေးနေတော့ ကျနော်လည်း စိတ်မရှည်ချင်တော့ဘူး..။ ကြာလာတော့ ကျနော်လည်း ပေါက်လာပြီး တကယ်သိချင်တာလား..သိချင်ရင် ဒီလို ဆိုပြီး..မရီးကို အိပ်ရာပေါ်ဆွဲလှဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း စနမ်းမိတော့တာပေါ့..။ သူကလည်း မူးပြီး စိတ်တွေ ကြွနေပုံရတယ်..။
ရုတ်တရက်ဆိုတော့ မငြင်းဘူးဗျ…။ ကျနော်လည်း ရှေ့ ဆက်တော့တာပေါ့…. အင်္ကျီနဲ့ ဘရာကိုချွတ်လိုက်တော့ သူ နဲနဲ ရှက်နေပုံရတယ်.။ ရင်သားတွေကို လက်နဲ့ ကာလို့ ပေါ့ ။ ကျနော်လည်း ဖြူဝင်းနေတဲ့ ရင်သားတွေ ကို မရ ရအောင် နမ်းရင်း နို့ သီးလေးတွေကို စို့ ပေးလိုက်တော့ အသက်ရှူသံတွေ မြန်လာပြီး လက်တွေက ရင်သားပေါ်ကနေ ဖယ်သွားတယ် မရီး တစ်ယောက် ဆန့် ကျင်ဖက်လိင်နဲ့မထိတွေ့ ခဲ့ဖူးတာ သေချာတယ်.။ရင်သားကို နမ်းတာနဲ့ တင် ထွန့် ထွန့် လူးနေပြီ..။ ရင်သားတွေကို နမ်းနေရင်းပဲ ကျနော့် လက်တွေက သူ့ ရဲ့ ပိပိဆီကို သွားနေခဲ့တယ်..။ လုံချည်ကို တွန်းချွတ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံဘေး ပေါင်ကြားခွကနေ လက် ညိုးလေး ထိုးထဲံမိလိုက်ချိန်မှာတော့ ပိပိထဲက ထွက်နေတဲ့ အရည်တွေဟာ အတွင်းခံမှာတင် အတော့်ကို ချွဲကျိ စိုရွဲနေပြီ..။ ပိပိကို လက်ညိုးနဲ့ကလိတဲ့အချိန်မှာလည်း တအင့်အင့်နဲ့ငြီးညူသံလေး ထွက်လာတယ်..။ အိမ်ထောင်သည်ပီပီ လုပ်ရမဲ့ကိစ္စတွေကို ဆက်တိုက်လုပ်သွားတာ မရီးအပျိုကြီးတော့ ကျနော့်ရဲ့ မြင်ကွင်းရှေ့ကုတင်ပေါ်မှာ အ၀တ်အစား ကင်းမဲ့စွာနဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကိုယ်လုံးက ကိလေသာတွေ လောင်မြိုက်နေပြီ..။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ထောင်မတ်နေတဲ့ လိင်တံနဲ့သူ့ ရဲ့ပေါင်ကြားမှာ ဒူးထောက်ထားရင်း ရှေ့ ဆက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ..။ မရီးကတော့ မျက်စိကို အတင်းမှိတ်ထားတော့တာပဲ ။ ကျနော်လည်း အပေါ်ကနေ သူ့ ကိုယ်လုံးပေါ်လှဲချပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းပြန်နမ်းလိုက်တယ်..။
ရင်ဘတ်ချင်းလည်း ဖိကပ်ပေးထားပြီး ကျနော့်ရဲ့ လိင်တံက သူ့ ရဲ့အရည်တွေ ရွဲနေတဲ့ ပိပိအ၀မှာ တေ့ထားလိုက်တယ်..။ ဒီတော့ သူ့ ရဲ့ ခါးက ကြွတက်လာပြီး ပိပိနဲ့ လိင်တံနဲ့ပိုလို့ နီးအောင် ကော့ပေး နေသလိုပဲ..။ အပျိုဆိုတဲ့ အသိစိတ်က ကျနော့်ခေါင်းထဲရောက်နေတော့ အရာရာကို အတင်းလုပ်လို့ မဖြစ်..နာကျင်မှုတွေ ဖြစ်ကုန်ရင် ပြ ဿနာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကို တွေးနေမိတယ်..။ ဒါကြောင့် ပထမဦးဆုံး လိင်တံထိပ်ကို ပိပိအ၀ကို စတေ့ပြီး.ဖြည်းဖြည်းချင်း ထည့် တာပေါ့..။ အရည်တွေ စိုရွဲနေတာတောင် ပိပိက ကျဉ်းလွန်းတော့ မ၀င်ချင်ဘူး..။ ထိုးထည့်လိုက်တိုင်း သူ့ ရဲ့ လက်တွေက အိပ်ရာခင်းကို ဆုပ်ကိုင်နေတော့တာပဲ..။ နောက်တော့ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ ကို ခပ်တင်းတင်းလေး သိုင်းဖက်လိုက်တယ်..။သူက လည်း ပြန်ဖက်လာတဲ့အချိန် လိင်တံကို သူ့ ရဲ့ ပိပိထဲ.တဖြည်းဖြည်းချင်း ကျိတ်သွင်းမိလိုက်တော့တယ်..။ နာကျင်မှုတွေ ရှိလို့ ထင်တယ်..မျက်နှာလေး ရှုံ့ မဲ့သွားပြီး.ပါးစပ်လေးလည်း ဟသွားတယ်..။ ကျနော့်ရဲ့လိင်တံက ပိပိလေးထဲ သေသေချာ ချာ ၀င်သွားတာ သေချာသွားတော့မှ ငြိမ်နေလိုက်တယ်..။ နာကျင်မှုတွေ ရှိနေရင် လျော့ပါးသွားအောင်လို့ ပေ့ါ ။
ပိပိက ကျပ်လဲကျပ် တခါ တလေ ညှစ်နေလိုက်သေးနဲ့ပိပိထဲမှာ သူ့ ရဲ့အရည်တွေက ရွဲသထက်ရွဲလာနေတယ်..။ သေချာနေပြီ..နာကျင်မှုထက် ကောင်းမွန်မှုဖက် ကို ရောက်လာခဲ့ပြီ..။ ကျနော့်ရဲ့ ဆီးခုံအမွေးတွေမှာလည်း ပိပိကထွက်တဲ့ အရည်တွေ တော်တော် ပေကျံနေပြီ..။ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့ ဆီက မောပန်းတဲ့အသံနဲ့တိုးတိုးလေး ပြောတယ်.။ ရင်တွေတုန်..ဒူးတွေလဲချောင်သလို ဖြစ် လာလို့ခဏနားရအောင်နော်..တဲ့..။ သူတစ်ချီပြီးသွားပြီဆိုတာ ကျနော်နားလည်လိုက်တယ်..။ သူပြီးသွားပေမဲ့ လည်း ကျနော် မပြီးသေး ပဲနဲ့ရပ်လိုက်ရတယ်..။ အဲ့ဒီလို ခဏနားနေချိန်လေးမှာ အသက်မှန်အောင်ရှူပြီး သူ့ ကို မေးလိုက်တယ်..။ ” ညီမ ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာ သိပြီလား ” လို့ …။ ကျနော့်ကို လက်သီးနဲ့ ထုတေ့ာတာပဲဗျာ..။ မရီးက ရှက်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ပဲ ခန္ဒာကိုယ်ကို အ၀တ်အစားတွေနဲ့ ကွယ်လို့ရေချိုးခန်းကို ပြေးတော့တာ.။ ခဏနေတော့ပြန်ထွက်လာတယ်။ ရေသောက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ပြန်လာတော့တာပဲ ။ သူကပြောသေးတယ်..ဒူးတွေ ချောင်နေသလိုပဲ တဲ့..။ စကားပြောရင်း ဟိုပွတ်ဒီပွတ်လုပ်လို့ နာရီဝက်လောက်အကြာမှာ သူ ကျနော့်ပါးကို စနမ်းလာတယ်.။ နောက်တကြိမ် ပြန်စနိုင်ဖို့အချက်ပေးခြင်းပေပဲလား..။ ဒီတခါတော့ ပညာ သုံးရတော့မယ်လေ..။ ပိပိက လိင်တံဆိုတာကို သိသွားခဲ့ပြီ.။
သူ့ ကို ပြန်နမ်းရင်းနဲ့ ပဲ ကျနော့်ရဲ့ မျက်နှာဟာ သူမရဲခန္ဒာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ရွေ့ ရွေ့ နဲ့ဆင်းသက်နေခဲ့တာ ပိပိအမွေးတွေကို လျှာနဲ့ လျှက်လိုက်တော့မှ သူမ ရုန်းထွက်ဖို့သတိရတော့တယ်.။ကျနော်ကလည်းကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပြီးသား..။ သူ့ ကို လက်နဲ့ အတင်းဖိပြီး အစိကို စပြီး လျှာနဲ့ ရွရွလေး လျှက်တော့တာပဲ..။ ပိပိနှုတ်ခမ်းသားတွေအတွင်းသားတွေ ကိုပါ နေရာလပ်မကျန်အောင် ထိတွေ့ ပေးလိုက်တော့ ၅ မိနစ်အတွင်းမှာ မရီးဟာ ကော့ပြန်လန်ပြီး ဖင်ဝလေးက ပွစိပွစိ ဖြစ်သွားလို့ပိပိ အရည်တွေ ထွက်လာပြန်ရော.။ ဒီတခါတော့ သူမဟာ ဆုံးခန်းတိုင်ကို ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ…။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီတခါတော့ ပြီးဆုံးဖို့လိုလာခဲ့ပါပြီ..။ ဒါကြောင့် သူမရဲ့ ဘေးကို လှဲချလိုက်ပြီး တပေါင်ကျော်ပုံစံလေးနဲ့အရည်တွေ အလွန်ရွဲနေတဲ့ သူမရဲ့ ပိပိထဲကို ကျနော့် ရဲ့လိင်တံ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးထဲလိုက်တော့တယ်..။ နောက်တော့ မှန်မှန်လေး အထုတ်အသွင်း လုပ်နေရင်း လက်တွေက ရင်သားတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေမိတယ်..။
သူမ အသံတောင်သိပ်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး..။ ၁၅ မိန်စလောက်အကြာမှာ ပိပိက ညှစ်ညှစ်လာတာကြောင့် ကျနော်ဟာ သုတ်လွတ်ချင်တာကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းမထားနိုင်တော့ပဲ ပူနွေးနေတဲ့ သုတ်တွေကို ပိပိထဲမှာပဲ ပန်းလွတ်လိုက်မိပါတော့တယ်.။အဲ့ဒီညနဲ့နောက်နေ့ကျနော် မပြန်မချင်း ၆ ခါလောက် အတူနေခဲ့ကြတယ်..။ သူမလည်း လိင်ခံစားမှုဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိရှိသွားခဲ့ ပြီ..။ နောက်ပိုင်းတွေမှာ သူ့ ရဲ့ ညီမ ..ကျနော့်မိန်းမ မသိအောင် အိမ်မှာရော သူမ တာဝန်ကျတဲ့ မြို့ မှာပါ သွားပြီး ခိုးစား ဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ။ တကယ်တော့ ဒီလိုကြီးနေတာက အမြဲတမ်းအတွက် မကောင်းလို့ကျနော် သူမကို အိမ်ထောင်ပြုစေချင်ခဲ့တယ်..။ ဒါပေမဲ့ သူမကတော့ ကျနော် ရှိနေရင် ရပြီ တဲ့…။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ ဟာ အခုအချိန်ထိ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်နေတုန်းပါပဲ……. ပြီးပါပြီ။
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် ဆေးမှင်စုတ်ထိုးသလိုဘဲ လုပ်မိရင် နောင်ပြင်ဖို့ ခက်သည် တဲ့ ။ မြရည်နွယ် တယောက် မိုးဟိန်းကို ယူမိတာ မှားပြီလို့ သူတို့ယူလိုက်ကြပြီး တလမပြည့်ခင် သိလိုက်သည် ။ မို့းဟိန်းကို အဖေက စစ်တပ်ဖက်က ကြီးကြီးမာစတာ အမေက ရတနာကုန်သည်မျိုးရိုး ဆိုပြီး အထင်ကြီးပြီး မြရည်နွယ် လက်ခံခဲ့တာပါ ။ မိဘဂုဏ်ရှိန်ကတော့ မြရည်နွယ် အထင်ကြီးခဲ့တဲ့အတိုင်း မြင့်မားသည် ။ ငွေကြေးလည်းချမ်းသာသည် ။ ဒါပေမယ့် မိုးဟိန်းသည် မြရည်နွယ်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် မထားနိုင် ။ မိုးဟိန်းရဲ့ ဒေါသတကြီးအော်ဟစ် ဆူပူတာတွေ အရက်အလွန်အကျွံသောက်တာတွေ ကိုယ်ထိလက်ေ၇ာက် နှိပ်စက်တာတွေကို မြရည်နွယ် ရင်ဆိုင်ရတော့ သည်လူကို ယူမိတာ အမှားကြီး မှားပြီလို့ နောင်တကြီးကြီး ရရသည် ။ […]
အဲ့ဒီ မနက်က…အိပ်မက်ကောင်းများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကင်းခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သောမည်ကာမတ္တအိပ်စက် ခြင်းတစ်ခုမှ ပျင်းရိညီးငွေ့စွာနိုးထခဲ့မိသည်…။ ဖြစ်နေကျမနက်ခင်းကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အေးတိ အေးစက်နှင့်ပေါ့ …။ ဘေးနားတွင် ရံဖန်ရံခါရှိခဲ့ဖူးသော အနွေးဓါတ်လေးတစ်ခုအား မရှိနိုင်မှန်းသိရက်နှင့် စမ်းဖြစ်အောင်စမ်း လိုက်မိသေး၏၊ အေးစက်သောအတွေ့ရှိသည့်သူ့မျက်မှန်ကိုသာစမ်းမိလိုက်သည်၊ သူအရှက်ပြေကောက်တပ်လိုက်၏၊ အမှန်တစ်ကယ် သူထိတွေ့ချင်ခဲ့သည်မှာ နုထွေးအိစက်လှစွာသောချစ် သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။ `လွမ်းစရာရှိလျှင် နာစရာနှင့် ဖြေရသည်´ ဟူသည့်စကားရှိသော်လည်း လွမ်းစရာကြုံလာ တိုင်းနာကျည်းစရာကို သူရှာမတွေ့ခဲ့မိပါ၊ တစ်ကယ်တမ်း နာကျည်းစရာများလုပ်ခဲ့သူက သူကိုယ် တိုင် ဖြစ်နေခဲ့သည်လေ။ သူ့ကို ` မ´ ထားရစ်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ပင် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ၊ ထားခဲ့သည် ဆိုခြင်းထက် စိတ်ပျက်ရွံမုန်းစွာ စွန့်ခွာသွားသည်ဆိုခြင်း က ပိုမှန်ပေလိမ့်မည် ။ `အားလုံး ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ မောင်ရယ်´ လို့သူမ ပြောခဲ့သော်လည်း ခုချိန်ထိအောင် […]